Fitaovana mandeha amin'ny fiara manokana | Die Casting And Cnc Machining Automotive Parts - Minghe Casting
Vahaolana momba ny fiara mandeha amin'ny fiara sy ny milina Cnc
IATF 16949 CUTTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING ho an'ny fizarana mandeha ho azy
Amin'ny maha fototry ny indostrian'ny fiara azy, ny faritra misy ny fiara dia ilaina mba hanohanana ny fampandrosoana maharitra sy salama ny indostrian'ny fiara. Manokana indrindra, ny fampandrosoana tsy miankina sy ny fanavaozana ny indostrian'ny fiara dia mivoatra am-pahavitrihana ary eo am-piandohana, ary mila rafitra faritra mahery hanohanana azy io. Ireo mpamokatra faritra lehibe indrindra dia nametraka teknolojia aerospace, fiaramanidina ary elektronika ho an'ny faritra sy fivoriambe. Ny haitao fiarovana, ny haitao elektronika, ny teknolojia fitsitsiana angovo ary ny teknolojia fiarovana ny tontolo iainana dia be mpampiasa amin'ny fiara. Manokana indrindra, ny haitao vaovao solontenan'ny teknolojia fampahalalana elektronika dia tsy vitan'ny be mpampiasa amin'ny vokatra mandeha amin'ny fiara, fa koa miitatra amin'ny lafin-javatra samihafa toy ny fampandrosoana sy ny endrika, ny famokarana andrana, ny famokarana ary ny fitantanana; tsy natao ho an'ny faritra mandeha irery, fa nampihatra ny fivondronan'ny rafitra ihany koa.
Ny marika tsy miankina amin'ny fiara sy ny fanavaozana ny teknolojia dia mitaky ampahany sy singa ilaina amin'ny fototra. Ny fanavaozana tsy miankina ny ampahany sy ny singa dia manana hery matanjaka ho an'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiara. Manan-kery sy mifampiresaka izy ireo. Tsy misy marika mahaleo tena misy fiara feno, ary rafitra misy faritra mahery Ny R&D sy ny fahaizan'ny orinasa manahirana dia sarotra vaky. Raha tsy misy ny fanohanan'ny rafitra faritra mahery, dia ho sarotra ho an'ny marika tsy miankina ny ho lasa lehibe sy matanjaka kokoa.
Ianao ve mila faritra amin'ny fiara mandeha ho azy?
Amin'ny maha mpanamboatra mari-pahaizana TS 16949 azy, i Minghe dia nandray anjara tamin'ny sehatry ny milina sy ny famonoana ireo singa mandeha amin'ny fiara. Ny mpiasa matihanina momba ny mpiasa dia afaka manome anao amin'ny alàlan'ny teny nindramina ho an'ny singa marina ilainao ho an'ny sinoa na koa any ampitan-dranomasina mamorona fiara. Ny vaovao tsara dia karazana fitehirizana fiara, ary koa manana kojakoja fiara tsara kalitao sy lafo vidy mifandraika amin'ny traikefa an'ny mpamorona motera vahiny, toa ny Toyota, Mazda miampy Hyundai. Mangataha quote maimaim-poana anio.
Mifandraisa amin'ireto injeniera momba ny fiara misy anao ireto anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1.Ny fampiharana automatique automatique automatique.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny vahaolana maty antoka ary ny fametahana machining cnc ho an'ny fampiharana fiara-miasa marobe, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny:
Fitaovana motera: vatan-tsolika, motera, fivorian'ny motera, paompy solika, baomba solika, fihenjanana, vovo-kazo, kirihitra mitondra, paompin-drano, tsindrona solika, gasket, camshaft, valizy, crankshaft, fivondronana tsorakazo, piston, fehikibo, Muffler, carburetor, solika tanky, fitoeran-drano, mpankafy, tombokase-diloilo, radiatera, sivana
Fitaovana Powertrain: fandefasana, fivorian'ny fihenam-bidy, fanodinana, famonoana, pneumatika, fitaovana elektrika, fitaovana elektronika, singa elektronika, kapila fametahana, fonosana rozy, fiarahan'ny rehetra, baolina eran-tany, baolina eran-tany, Cage ball, takelaka fametahana, tranga famindrana, fandraisana fahefana- eny, mpampifangaro, peratra mpampifandray, fehikibo fotoana, fahasamihafana, tranga misy fahasamihafana, nify zoro kapila miiba, planeta planeta, mpitatitra kodiarana, flange, boaty fanamoriana, hazo mpanelanelana, fitaovam-piadiana, kitapom-bitsika, fantsom-by
Fitaovana fanamoriana rafitra: kiraro frein, pad freins, disc disc, drum drum, compressor, assembles freins, assemblement pedal freins, silinder master master, silinder freins, Controllers ABS-ECU, pumps hydraulic electronics, camshaft frein, roller roller, pin Tellurium frein, fanitsiana frein sandry, efitrano fandraisam-bahiny, fanamafisam-peo, fanamafisam-peo, fivoriambe familiana fijanonana, fivorian'ny fihenam-bidy miasa
Fitaovana rafitra familiana: fitaovana familiana, familiana baolina kodiarana, familiana familiana, familiana, fanamafisam-peo, familiana familiana, paompy herinaratra ...
Fitaovana mandeha: axe aoriana, rafitra fampiatoana rivotra, lanja fandanjana, takelaka vy, kodiarana, lohataona ravina, axe antsasaky, mpitroka hatairana, fivorian'ny peratra vy, kofehy famaky antsasaky ny trano, trano fonenana, rafitra, fivoriambe, lampihazo misy kodiarana, tetezana eo anoloana
Fitaovana mandeha amin'ny herinaratra elektrika: sensor, jiro automatique, buzzer, plug-bins, batterie, harnesses tariby, relay, audio, alarme, regulatera, mpaninjara, starters (motera), fitaovana tsy mandeha amin'ny lalana, fitaovana automatique, switch, fuse, Glass lifter, generator, ignition coil, thermostat igniter, modely fandrehitra
Jiro mandeha ho azy: jiro haingon-trano, jiro, jiro fikarohana, jiro valizy, jiro fanoherana ny zavona, jiro fitaovana, jiro frein, jiro rambo, jiro fihodinana, jiro vonjy maika
Fanovana fiara: paompy kodiarana, fitoeram-baravaran'ny tafo fiara, boaty tafo fiara, winches elektrika, buffer fiara, sunroofs, fitaovana fanamafisam-peo, mpitrandraka, elatra rivotra maharitra, fender, fantsom-pamokarana, toekarena solika
Fiarovana sy fanoherana ny halatra: hidin-kodia, hidin-kodia, fitaovana fanoherana ny fangalarana, fitaratra fijerena, rafitra fijerena aoriana, fakan-tsary, fehikibo, fakan-tsarimihetsika, fanaraha-maso afovoany, GPS, ABS, radara miverina, hidin-trano
Atitany fiara: karipetra fiara (paingotra tongotra), fonosana amin'ny familiana, baolina fanamoriana familiana, ambainy, fitaovan'ny masoandro ...
Fiara ivelany fiara: fonosana kodiarana, sticker vita amin'ny loko amin'ny vatany, mpihazona lozisialy, rakotra orana sy orana .. rafitra fanaraha-maso ny tsindry kodiarana, decoder, fampirantiana, fifampiresahana fiara ...
Vatana sy kojakoja: wiper, vera fiara, fehikibo fipetrahana, airbag, panneaux instrument, fantsom-panafoanana antenika fanafoanana static ...
Fitaovana fikojakojana: rafitra fanadiovana fitaovana vita amin'ny metaly, mpanitsy kodiarana ...
Power Tools: totohondry herinaratra, basy rivotra mafana, jack elektrika, valizy elektrika ...
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa momba ny fiara misy anao
Minghe dia manana traikefa mihoatra ny 30 taona manampy ireo mpanamboatra fiara-miasa hamorona singa otrikaina mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy presse 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny sasantsasany amin'ireo fizarana fiara mitaky faran'izay mafy indrindra amin'ny lafiny volavola, haben'ny ampahany ary ny fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc ary ny aliminioma amin'ny famaritana kalitaon'ny fiara.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, dia manana ny fahaizany manamboatra faritra amin'ny fiara amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny fonony miditra amin'ny fonenana lehibe ka hatramin'ny trano lehibe ho an'ny kamio.
3. Fitaovana ampiasaina matetika ho an'ny faritra mandeha ho azy manokana amin'ny alàlan'ny Die Casting
Minghe dia manana ny fahaizana manokana manampy anao hisafidy ny firaka mety amin'ny fampiharana raha ilaina. Mampiasa alloys marobe izahay mba hihaona amin'ny famaritana ny mari-pana, ny fampiasana ary ny tanjaka. Ny sasany amin'ireo alimo aliminioma sy zinc-aliminioma ampiasainay dia misy AL360, AL380, AL383, ary AL413, ZA-8, ZA-12, ZA-27. Manome serivisy fandefasana koa izahay amin'ny alàlan'ny K-Alloy. Ho fanampin'ny alloys isan-karazany, PHB dia manolotra serivisy famaranana ao anatin'izany ny fonosana vovoka, loko mando, fanapoahana vakana, EMI / RFI ampinga, chrome, sns.
4. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra fiara mandeha ho azy
Cnc machining kojakoja fiara
Vidiny lafo vidiny - Omeo hatrany ny mpanjifa ny vahaolana famokarana manokana mandaitra indrindra ho an'ny faritra mandeha amin'ny fiara CNC
Fitaovana manara-penitra - Fitaovana maintso sy mateza mahafeno ny filàna manokana amin'ny vokatra mpamokatra fiara
Volavola manokana - Mamolavola ary mamokatra ampahany sarotra amin'ny fiara mandeha amin'ny fiara mifototra amin'ny sary sy santionan'ny mpanjifa
Fahamarinana avo lenta - Ekipa famolavolana sy famokarana faran'izay tsara dia miantoka ny fahamendrehana avo lenta amin'ny singa fiara masinina tsirairay
Fahafahana matanjaka - milina CNC an-jatony manara-penitra ho an'ny vokatra Automotive no mahazaka famokarana betsaka
Hafaingam-pamokarana - Manome prototyping automotive haingana sy vahaolana amin'ny famokarana haingana
Serivisy tena tsara - Ampifandraiso amin'ny mpanjifa ara-potoana ny fandrosoana ary alao ara-potoana
Ny fanariana no fomba fampiasa matetika amin'ny famokarana banga. Ny fomba fitetezana ny metatra dia azo amboarina amin'ny karazana castings automotive misy endrika sarotra.
Ny tena mampiavaka ny fanodinana fiara dia ny rindrina manify, ny endrika sarotra, ny lanja maivana, ny fahamendrehana tsara, ny refy avo lenta ary ny habetsahan'ny famokarana isan-taona. , sns.
Nandritra ny 30 taona, izahay, amin'ny maha mpanamboatra milina fitetezam-paritany azy, dia nanamboatra fanodinana otrikaina avo lenta ho an'ny tanjona maro eo amin'ny tsenan'ny fiara.
Manana traikefa fanamboarana fanandramana lehibe ho an'ny indostrian'ny fiara isika. Ny fanaparitahana fiara dia mampiasa ny safidin'ny safidy ho an'ny mpanamboatra fiara maro.
Ny Sand Casting dia matetika ihany koa amin'ny famokarana singa fiara, toy ny «bloc de moteur», «manifold engine», lohan-varingarina ary tranga fitaterana.
Ny fanariana fasika dia azo hamokarana mora foana amin'ny firaka ferro na tsy ferrous.
Ny vidin'ny fitaovana maivana dia mahatonga ny fanariana fasika ho an'ny safidy ilaina amin'ny filana ambany kokoa.
Ny famoahana fasika dia azo amboarina amin'ny lanjany manomboka amin'ny ainy hatramin'ny 200+ taonina.
Satria mety kely dia kely ny vidin'ny fitaovana, mety ho mety amin'ny hazakazaka tokana ny fanariana fasika.
Ny fizotran'ny fandefasana azy dia mety ho haingana kokoa noho ny sasany, toy ny fanodinam-bola, fa zava-dehibe ny fiheverana ny fizotran'ny fanodinana toy ny milina mety hilaina rehefa manisa ny fotoana fitarihana tanteraka.
Fahamarinana ambany kokoa
Raha ambany ny vidiny noho ny fitaovana ho an'ny hafa nandatsakaamin'ny fizotrany, mbola misy zavakanto hamolavolana modely.
5.Ny fahafahan'ny famokarana mazava ho an'ny faritra mandeha amin'ny fiara
Fitaovana fanariana maty ho an'ny faritra mandeha amin'ny fiara (fiara):
Fahaiza-mamarana amin'ny alàlan'ny fiara:
Fomba fanamboarana fiara mandeha isan-karazany:
Machining automatique cnc automatique ary apetraka amin'ny casting casting:
Takelaka anatiny, lasitra Die, lamasinina fiara, Pistons, Camshafts, charger Turbo, kodiarana Aluminium, motera fanombohana, lohan'ny varingarina, famaky fiara, Gearboxes, Fizarana manokana ary Prototyping Applications
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny faritra mandeha amin'ny fiara
Safidio ny serivisy fitaterana faritra tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny faritra misy ny fiara sy ny milina fanondranana dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana faritra misy fiara.